Indlu yestudio enemibono yehlathi yepanoramic
Razdolievsky, Leningrad Oblast, Russia
I-studio cottage epholileyo ezimbini, kunye neefestile ze-panoramic kunye nembono yehlathi.
📌 Indlu efudumeleyo, entle kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo kanye ecaleni kwehlathi, ibhedi enomandlalo olungileyo wobuthongo obumnandi. Ingaphakathi elihonjisiweyo kunye nayo yonke into oyifunayo ukuze uphile.
📌Ilungele iholide yokuphumla: ihlathi elingenasiphelo, ichibi lemizuzu emi-2 ukusuka endlwini, indawo yokuhlambela eselunxwemeni, unxweme lwayo ikulindile.
📌 Sinendawo yokuhamba, ihlathi lizele ziindlela, ukuloba okumangalisayo, amakhowa kunye namaqunube, izilwanyana zamahlathi.
📌 Qasha ibhafu okanye isikhephe.
Indlu epholileyo yeendwendwe ezimbini.
📌 Indlu ishushu + ixhotyiswe ngeconvector kunye nomgangatho oshushu kwigumbi lokuhlambela (Ukuba kuyimfuneko, yiza nawe iikawusi okanye iziliphu)
📌 Indawo yokulala: enebhedi ephindwe kabini kunye nomatrasi ogqwesileyo (ububanzi obuyi-140 cm), iduvet, imiqamelo emibini, ilinen yokulala ibonelelwe. Ityesi yeedrowa zokugcina izinto.
📌Ikhitshi: incinci kodwa ikhululekile, inezixhobo zokupheka (ipani yokuqhotsa, ipani, ipani) kunye nokuphaka (iipleyiti, i-cutlery, iikomityi kunye neeglasi zewayini, njl.njl.), kukho umenzi wekofu yegiza, kunye neti, ioyile, netyuwa, iswekile kunye nobulawu. Amanzi etephu ayaselwa, acocekile, ane-ph elungileyo (uhlalutyo luyafumaneka) Undoqo: isitovu, iketile, ifriji ekhoyo :). Indawo yokutyela (itafile, ukuba kuyimfuneko, ihamba ngaphandle kunye nezihlalo ezi-4).
📌 Igumbi lokuhlambela: lidityanisiwe (Ishawa yeGrohe) (iitawuli, ishampu, ijeli yeshawa, isepha kunye nephepha langasese), amanzi ashushu (ibhoyila), imigangatho efudumeleyo enolawulo lobushushu.
📌 Phambi kweshawari kukho igumbi lokunxiba, indawo eluncedo, apho uya kufumana iingubo, iihanger, ifumigator, izinto zococeko, ezinye izitya kunye nesamovar.
📌Ithafa elincinci elinokukhanya, iindawo zokuhlala ezimbini zelanga kunye nendawo yokupheka yangaphandle, i-Weber grill, iigrayiti, i-charcoal starter, itafile eneebhentshi zokutyela ngaphandle.
4.99 ·Izimvo eziyi-80
4.99 · Izimvo eziyi-80
📌Kwisiqingatha seyure ukufumaneka kweendawo ekuchithelwa kuzo iiholide zase-Igora naseKorobittino. Iivenkile ezikufutshane ziseSosnovo (malunga neekhilomitha ezili-15).
📌 Asinabamelwane ngokwenyani, ifama yonke yahlulwe yangaziziqendu ezi-3, kuba isiza sikhulu, umgama phakathi kwabamelwane nawo mkhulu, okuthetha ukuba akukho mntu uya kukukhathaza.
📌 Indawo icocekile ngokwendalo, ihlathi lengxowa-mali yehlathi., Ungadibana nezilwanyana zehlathi, bambalwa kakhulu abantu abakufutshane :)
📌Asiyondawo yenkampu, ngoko akukho bamelwane bangxolayo.
📌Eendwendwe kukho ukuhambahamba ehlathini, ukuloba, amakhowa kunye namaqunube ngexesha lonyaka.
📌Kwakhona sinokunikezela ngerenti yendawo yokuhlambela yebhari kanye elunxwemeni lwechibi. Kukho indawo yokuqubha encinane kunye neleli yokuqubha kamnandi.
📌Simi kunxweme lweLake Kotovsky (unxweme lwethu). Ukusuka kwindlu ukuya echibini -150 yeemitha, imizuzu emi-2 ukuhamba. Kuyenzeka ukuba uqeshe isikhephe sokuhamba kunye nokuloba. Ukurenta intonga edadayo.
Sisoloko sifumaneka ngokusebenzisa nawaphi na amajelo onxibelelwano, sinokuhlala kwindlu ekufutshane, kwintsimi.
Indlu ibekwe ecaleni kwendlu yeendwendwe, kodwa oku akukhange kuthintele naziphi na iindwendwe zethu ukuba ziphumle)